၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ ထဲက စဉ်းစားစရာတချက် ……. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ ထဲက စဉ်းစားစရာတချက် …….
၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ ထဲက စဉ်းစားစရာတချက် …….
Posted by fatty on Aug 13, 2010 in 2010/2012/2015 Election |9comments
မကြာမီ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်း မဲပေးခွင့် ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မဲဆန္ဒ တပြား ဟာဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ် ဆိုတာထက် chatting လောက် ချဲ လောက် ဘောလုံးပွဲလောက် ဘီယာလောက် ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားတာမတွေ့ ရပါဘူး။
မဲပေးရမဲ့အချက်ထဲမှာ ဘယ်အချက်ပါနေလဲဆိုရင် …………………………
အစိုးရ ရယ်လို့ဖြစ်လာရင် …………. အဲဒီအစိုးရက တာဝန်အရ လုပ်သမျှ တွေကို …….. ဘယ်ဥပဒေ နဲ့မှအေ၇းယူမှုမရှိ စေ ရ တဲ့။
…………………… ကဲ .. ကျောင်းသားရော သံဃာေ၇ာ နားမလည်ဘူး ….. ငြိမ်းချမ်းစွာ တောင်းဆို တာတွေ ဘာတွေ မလိုချင်ဘူး
အကုန်ဖမ်း …အကုန်သတ် …. အေးအေးဆေးဆေး ချဲထိုးချင်ထိုး …ဘောပွဲ လောင်းချင် လောင်း ….အေးအေးနေ ……. chatting သာအေးအေးဆေးဆေး ရိုက်နေ ….
ကဲ …..အဲဒီဥပဒေကို ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ။
ဘယ်လိုမှ မလုပ်နဲ့ လေ ဗျာ
လုပ်လို့ မရလို့ တောင် ထိုင်ကြည့် နေကြပြီပဲ လူငယ် တွေ က စိတ်ဓာတ်တွေ မရှိတော့သလိုပဲ ဗျ
ခုဆို နိုင်ငံရေး လို့ ပြောရင် ပါတီ အကြောင်းပြောရင် အဖမ်း ခ့ရမှာ မကြောက် ဘူး လား ဆိုတဲ့မျက်လုံးမျိုးနဲ့ ကြည့် တတ်ကြတယ်ဗျ
အဲ့ အကြောင်းတွေ ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောခွင့် ရှိနေပြီ ဆိုတာ ဘယ် သူမှ နားမလည်သေးဘူး နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ လူကြားထဲပြောကြည့် ခင်ဗျား ကိုကြောက် စရာ သတ္တ၀ါ တစ်ကောင်လို မြင်လိမ့် မယ် လူတွေ က
ဒါနဲ စကားမစပ် လှည်းတန်း IT Cafe မှာ စနေနေ့ လေးနာရီ ဆို ပါတီ တွေ နဲ့ ပတ်သတ် ပြီးရှင်းပြ ဆွေးနွေးတဲ့စကားဝိုင်းတစ်ခုလုပ်တယ် ဆိုပဲ
သွားတော့ မကြည့် ရသေးဘူး
In normal society, the voters education program can offer the first time voters about the importance of voting, right and responsibility of citizens, and value of democracy being able to elect the people`s government/ members of parliament.
In Burma, this election is fraught with illegal activities committed by military authorities. The extent of fraudulent acts are beyond one`s belief; things to be expected from the so-called authority. We can see all kinds of dehumanising lies and underhand behaviours during this pre-election period. Normally the election commission is responsible for levelling the playing fields for all inclusive stake holders. This election watch dog is likeatame dog of military masters lacking any sense of credibility the same as their military Generals. If we could bring them all in front of the students in Bangkok university for debate and scrutiny, the military thugs would not find any chance to defend themselves explaining their criminal acts . Can they stand the chance to justify themselves in their subconscious minds? Can they please their own ancestors for being so cruel to people and country?
The constitution ushering in this fake election was written and legalised by military thugs out of their murderous brain. It had already lost the test of the time. One minister had roared in front of the meeting that military will stage coup if it does not win the election. He had effectively crushed 2008 constitution under the war boot and the constitution died within days. The stupidity of the Generals can incredibly blown away our normal thoughts and ideas.
I would ask all eligible voters to boycott the election to show our love to our mother country, imprisoned leaders and fallen heroes of 8888. The 8888 had brought the stupid general to usher in 1991 election. They crushed the NLD`s victory with military boots. Now they had to do 2nd election due to 8888 and 2007. With our full respect to our leaders and mother country, we must all pledge ourselves to BOYCOTT THE ELECTION. ELECTION+ NIL VOTES= FAILED ELECTION.
ဆွေးနွေးတာပါ။ မတူတဲ့အမြင်ဆိုရင် လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲကြတာပေါ့နော..။
ဆိုင်ကလုံးနာဂစ်က မြန်မာပြည်ထဲဝင်တာ မေလ ၂ရက် ၂၀၀၈၊
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအတွက် လူထုကိုမဲသွားပေးခိုင်းတာက မေလ ၁၀ရက်၂၀၀၈ (24 May 2008 in some townships)
၈ရက်ပဲခြားပါတယ်။ လူသေအလောင်းတွေတောင် မကောက်ရသေးပါဘူး။ မြန်မာပြည်ရဲ့စပါးကျီခေါ်တဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း ထိတာမို့ လူထုခမျာ စားဖို့ရှေ့ ရေးတောင် သေချာ၊မသေချာ မသိပါဘူး။
လူထုခမျာ လူတွေသိန်းချီသေလို့ စိတ်သောကတွေနဲ့ ဖြစ်နေတာမို့ အစိုးရ၀န်ထမ်း၊ တပ်မတော်သားတွေအပါအ၀င် ဘယ်သူမှ အာရုံမရောက်ပါဘူး။ မဲလဲသွားမထည့်နိုင်သူတွေအများကြီးပါ။ သပိတ်မှောက်တာထက်တောင် ဆိုးတဲ့အခြေအနေပါ။ သဘာဝတရားအရကို အဲဒီလိုဖြစ်သွားတာပါ။
Referendum passed Yes 24,764,124 93.82%
ခေါင်းစဉ်နဲ့ကိုက်အောင် ဖြတ်ပြောကြည့်ရရင်…မြန်မာလူထုရဲ့ဒီလိုအခြေအနေကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။
သံတမန်စကားငှားသုံးရရင် “လက်သည်းတွေဖွက်ထားတာ” နဲ့ တူတယ်ပေါ့..။
လူထုက အခြေအနေတွေ သေသေချာချာ(သေသေချာချာ)စောင့်ကြည့်ကြနေတယ်လို့..ဘာသာပြန်လိုပါတယ်ခင်ဗျား…။
Than Shwe was not watched by International Criminal Court in 2008 referendum. He did it secretly. This 2010 election is under spot-light of Global audience. He must be very worried about non-compliance of millions voters. He can be caught this time. People must remember 8888 spirit and fallen/imprisoned leaders/mother country. BOYCOTT.
ကျွန်တော်က ၈၈ မှာမွေးတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ.. ကျွန်တော်လူမှန်းသိတက်စ အချိန်ကစပြီး ယနေ့ထိ အာဏာရှင် စစ်အစိုးရအုပ်ချုလာတာ ဆိုတော့ ပါတီ တွေ… လွှတ်တော်တွေ… အမတ်တွေ.. မဲဆန္ဒနယ် စတာတွေကိုလုံးဝနားမလည်ခဲ့ဘူး… အခုလဲ လေ့လာနေတုန်းပါပဲ…. နောက်ပြီး အခုလက်ရှိမှာက ပါတီတွေက အများကြီးပဲ… ဘယ်ပါတီကိုဘယ်သူကခေါင်းဆောင်တယ်ဆို တာ တောင်မှတ်မိဖို့မလွယ်ဘူး… နောက်ပီးသူတို့တစ်ယောက်ချင်းဆီရဲ့ သမိုင်းကြောင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတွေ…. ဒါတွေကိုပါသိထားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်….. ကြံ့ဖွတ် ကိုတော့ ရွံတယ်… မြင်ကိုမမြင်ချင်တာ…
အာဏာသိမ်းအစိုး၇များကေ၇ွးကောက်ပွဲနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာမထဲ့မနေထဲ့လေ့၇ှိတဲ့အချက်ကတော့… “စစ်အုပ်ချုပ်ေ၇းကာလအတွင်းဆောင်၇ွက်ခဲ့သောကိစ္စအ၀၀ကိုနောက်ကြောင်းပြန်အေ၇းယူဆောင်၇ွက်ခြင်းမ၇ှိစေ၇”..ဆိုတဲ့ “ချစ်စ၇ာကောင်းတဲ့”ဥပဒေပြဌာန်းချက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလွှမ်းခြုံကာကွယ်လေ့၇ှိကြပါတယ်။ ဒီ(၂၀၀၈)အခြေခံဥပဒေက (ယုံချင်ယုံ၊မယုံချင်နေ)အတည်ပြုပြဌာန်းပြီးပြီမို့ဘာမှလုပ်မ၇တော့ပါ။ သေသေခြာခြာလေ့လာကြည့်၇င် (၁၉၇၄)အခြေခံဥပဒေ၇ဲ့လွှတ်တော်သက်တမ်းနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ေ၇းကာလပြဌာန်းချက်များကိုလည်း၊ အဲ့ဒီအချိန်ကပါတီဗဟိုကော်မတီမှာလက်ညီိုးထောင်ခေါင်းညှိမ့်ပြီးနောက်တနေ့လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုပြီးအခြေခံဥပဒေ၇ဲ့ပြင်ဆင်ချက်တခုဖြစ်သွားဘူးပါတယ်။